वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, फागुन ३, २०७६ मा प्रकाशित
साथीले यो पटक पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनबाटै चुरोट छाड्ने कसम खायो । नयाँ वर्षको अघिल्लो रात न्यू इयर इभका नाममा अनि भोलिदेखि छाड्ने उपलक्ष्यमा ‘अन्तिम’ सर्को चुरोट तान्यो । नयाँ वर्षको पहिलो दिन संयोग बस त्यो साथीसँग भेट भयो । मलाई देख्ने वित्तिकै हतार हतार भन्यो– ‘चुरोट छाडेको उपलक्ष्यमा अन्तिम पटक एक खिल्ली तानेको ।’ हिजोसम्म साथी चुरोट खान्थ्यो, चुरोट छाडेको उपलक्ष्यमा भोलिपल्टदेखि तान्न थालेको छ ।
त्यसको एक महिनापछि विवाह निश्चित भएको भनेर निम्तो कार्ड थमाउँदै, अब विवाह हुनुभन्दा अगावै चुरोट छाड्ने वाचा खाएर गयो । अनि त्यसपछि के भयो होला ?
त्यसपछिको कथा उसकै शब्दमा– आज बाले क्या दिए नि मलाई । आफू पूरा सिक भएको थिएँ । विवाहको दुई दिन अघिदेखि नै के के मा व्यस्त हुनुपर्यो । पूर्वाङ्गको दिन घरका सबै जना र पुरोहितले खोला तर्न हुँदैन भन्दिए । अरुमा त्यस्तै हो, चुरोट त मागेर खान्न भन्ने वाचामा पक्का थिएँ, तर पसल जान पाइन । केहि सीप नलागेपछि बाले निदालमा सिउरिएर राखेको खुकुरी ब्राण्डले काम चलाएँ, त्यो पनि ह्याट्रिक हुने गरी । सूर्यभन्दा तलको ब्राण्ड अहिलेसम्म धुवाँरेको थिइन । अहिले त बाको चोरेर खुकुरीले काम चलाएँ । विवाहको दिन नुहाएर फर्कदैं थिए, ढोकैमा रोकेर बाले भने– छोरा आज त यत्रो मान्छेको भीड छिरेर ठूलो मुसा छिरेछ, तैंले पनि ख्याल गरिनस ? मेरो मनमा ठूलै झड्का लाग्यो, कतै विवाहको माला त काटेन, कि कोट नै काट्यो मनमा अनेकौं प्रश्नहरु एक साथ आए । अनि आत्तिदैं सोधें– के भयो र बुवा ?
आत्तिनु पर्दैन, ठूलो कुरो त हैन, मेरो खोल्दै नखोलेको चुरोटको बट्टा काटेछ, अनि तीन खिल्ली उडाए छ बान मुसोले । मैले भेटेको भएँ, पुच्छरमा समाएर डाँडो कटाई दिन्थें । देखिन र त्यो बच्यो आज ।
बाको कुराले माघमा चिसो पानीले नुहाएर चिसिएको म तातिएँ, रात्तिएँ पनि ।
विहेको दिनमै डायलग खाए पछि त म फेरि चुरोट छाड्ने अठोटमा पुगेँ । तर विवाहको दिन गोडा धुने र कन्यादानको कार्यक्रमले उकुसमुकुस भएँ । कन्यादान सकियो, उनी लुगा फेर्न चेन्जिङ रुप छिरिन । म पिसाब फेर्न भनेर शौचालयतिर लागें, एउटा साथी तानिरहेको रहेछ, त्यही खोसेर तलतल मेटें । विवाहको दिन गरेको वाचा त पूरा गरिन नै पूर्ववत अर्को एउटा वाचामा पनि चुकें । मागेर चुरोट नखाने वाचा त्यही दिन तुहियो ।
माघ महिनामा मेरो साथीको मात्रै हैन, विवाह भएको, अनि विवाहको दिन चुरोट तान्ने ऊ एक्लो बेहुलो पनि भएन । माघमा उसको जस्तै अरुको पनि विवाह भयो, जग्गेबाट बाहिरिएर गल्लीमा चुरोट तान्दै गरेको अरु बेहुलोहरु पनि देखिए । माघमै पर्छ विश्व क्यान्सर दिवस पनि । क्यान्सरको प्रमुख कारणमा धुमपान सेवनलाई मानिन्छ । क्यान्सर दिवस नै भनेपछि होला त्यसको प्रवद्र्धनमा बेहुला पनि लागि परेका छन । भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले जसरी प्रचार गरिरहेको छ, त्यसलाई माथ गर्ने गरी बेहुलाहरु चुरोट कसरी तान्ने भनेर ‘डेमो’ गरेर देखाइरहेका छन । क्यान्सर दिवसलाई सघाउन बेहुलाहरुले गल्लीमा निस्केर चुरोट तान्नु तानिरहेका बेला बेहुलीहरुले पनि सघाउने हो कि ?
मेरा बाले धुमपान गर्नेहरुलाई तीन भागमा बाँडेर व्याख्या गर्नु हुन्थ्यो– धुरी फुकुवा, पिंढी ढुकुवा र मझेरी थुकुवाका । धुरी फुकुवा भनेको चुरोट खाने, पिढीं ढुकुवा भनेको तमाखु खाने वा भनौं हुक्का तान्ने र मझेरी थुकुवा भनेको चाहिं सुर्ती खानेलाई बुझ्नु पर्छ ।
यसलाई पनि तीन भागमा बाँडेर हेर्नु पर्दछ–अम्मली, तम्मली र ढुकुम्मली । अम्मली भनेको नखाई नहुने, जसरी पनि खानुपर्ने । तम्मली भनेको तालमाल मिलेको बेलामा खाने, मेसो मिलाएर खाने, मेसो नमिले नखाए पनि हुने । ढुकुम्मली भनेको गौंडा ढुकुरे खाने । केशबराज पिंडालीले लेखेको खै खै शीर्षकको निबन्ध एक पटक सम्झँदा हुन्छ सबैले एक पटक । यसले पनि धेरै कुरा भन्छ ।
अम्मलीहरु सकेसम्म अभिभावकहरुले नदेख्ने गरी खान्छन । सरकारले खुल्ला बिक्रिमा रोक लगाए पनि क्याम्पस वरपरका क्याफेहरुमा चुरोटको ब्यापार राम्रो रहेको ब्यापारीहरुको अनुभव छ । प्लस टु पुस्ताको पनि यो अभियानमा राम्रो साथ रहेको छ । लोकगायक कुमार बस्नेतले एउटा मूल मन्त्र दिएका छन धेरै पहिला नै– ‘ठूटो चुरोट सलाईले सल्काउने, लामो चुरोट तरुनी पल्काउने’ भनेर । यसैको प्रभाव हो कि प्लस टु पुस्ता लामो चुरोट ‘गर्लफ्रेण्ड’ फकाउन भनेर प्रवद्र्धन गरिरहेका । धुमपान र मध्यपानको असरका बारेमा विद्यालय तहदेखि नै पढाई हुन्छ । क्यान्सरको बारेमा पनि पढाई हुन्छ । नेपालमा साक्षरतादर पनि बढिरहेको छ, रोगीको संख्या पनि बढिरहेकै छ । नेपालमा हरेक क्षेत्रले भारतको सिको गर्छन भनिन्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढि धूमपान गर्ने महिलाहरु भारतमा छन । अनि नेपाली महिलाहरु पनि त्यसको पछि पछि लागेका छन् ।
क्यान्सर समयमै पत्ता लगाउन सकेमा ४० प्रतिशत क्यान्सर निको हुने चिकित्सकहरु बताउँछन । नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस क्यान्सरको उपचारका लागि समयमै अस्पताल पुग्दैनन । समयमै उपचारका लागि नपुग्दा अधिकांश विरामीले जटिल समस्या भोग्नु परिरहेको छ । विश्वभरी क्यान्सरका विरामीहरुको तथ्याँक राख्ने ग्लोबोक्यान नामक संस्थाले गरेको अनुमान अनुसार नेपालमा बर्सेनि ५० देखि ७० हजार नयाँ क्यान्सरका विरामी देखापर्छ । यो अनुमानलाई आधिकारिक मान्न नसकिए पनि अस्पतालमा दर्ता भएका विरामीहरुको संख्याको आधारमा नेपालमा तीव्र रुपमा क्यान्सर रोगीको संख्या बढिरहेको छ । तर तीमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र अस्पताल आउने गरेको बताईन्छ । बल्ल–बल्ल आएका पनि जटिल समस्या भएपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेका छन । क्यान्सरको सामान्य लक्षण देखिनेबित्तिकै उपचारका लागि जाने हो भने विरामीले पुनजीवन पाउन सक्छ ।
विकसित राष्ट्रहरुमा क्यान्सर विरामीहरुको संख्या घटे पनि विकासोन्मुख देशहरुमा भने बर्सेनि वढ्दो छ । क्षयरोग र एचआईभी एड्सबाट मृत्यु हुनेभन्दा क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अत्यधिक छ । ९० प्रतिशत क्यान्सरको प्रमुख कारण धुमपान, अस्वस्थकर खानपान, वातावरणीय प्रभाव रहेको चिकित्सकहरुको दाबी छ ।
शरीरमा गाँठागुठि तथा गिर्खा देखिनु, कोठि वा मुसाको आकार र रङ परिवर्तन हुनु, थकाई बढि लाग्नु, लामो समयसम्म घाउ निको नहुनु क्यान्सर रोगका लक्षण हुन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३० भित्र क्यान्सरका कारण हुने मृत्युदरलाई २५ प्रतिशत घटाउन नसकिए बर्सेनि एक करोड ७० लाखदेखि दुई करोड ६० लाख मानिस क्यान्सरको सिकार हुने चेतावनी दिएको छ । क्यान्सरबाट हुने मृत्यु घटाउने एक बलियो उपाय धुमपानमा बानी नपार्नु नै हो । खानेबानी भएकाले पनि छाड्ने हो । कतिपयले भन्ने गर्छन धुमपानसहितका अन्य अम्मलहरु छाड्नका लाखौं कोशिस गर्दा पनि सकिन । अनेकौं बाहना गर्नेहरुका लागि यो एउटा प्रेरक कथा– एकपटक आचार्य विनोबा भावेको निवासमा उनलाई भेट्न एक जँड्याहा आइपुग्यो । उसले आचार्यलाई हात जोडेर भन्यो, ‘महात्माजी, यो रक्सीले मलाई मार्ने भयो । म यसलाई छाड्न चाहन्छु, तर यसले मेरो पिछा कहिल्यै छोड्दैन । त्यसैले तपाईं कुनै यस्तो उपाय बताउनुस्, जसले गर्दा यो रक्सीले मेरो पिछा छोडोस् ।’ आचार्य विनोबाले त्यस जँड्याहालाई अर्को दिन आउनू भन्दै बिदा गरे । त्यो मानिस जाँदाजाँदै आचार्यले भने, ‘भोलि आउँदा तपाईं मलाई बाहिरैबाट बोलाउनुस्, म आफैँ बाहिर आउनेछु ।’
अर्को दिन त्यो जँड्याहा आयो र उसले बाहिरबाटै आचार्य विनोबालाई बोलायो । तर, आचार्य बाहिर निस्केनन् । बरु भित्रबाट उनको आवाज आयो, ‘हेर न मित्र, म कसरी बाहिर आऊँ ? यो खम्बाले मेरो पिछा छोडिरहेको छैन । म यसको जालबाट उम्किनै नसक्ने भएँ ।’ त्यो मानिसले आश्चर्य मान्दै भित्र चियाएर हेर्यो, त्यहाँको दृश्य देखेर ऊ छक्क प¥यो । भित्र आचार्य विनोबा खम्बा समातेर बसेका थिए । अनि उनी भनिरहेका थिए, यो खम्बाले मलाई छोड्नै मानिरहेको छैन ।
त्यो सब देखेपछि त्यस मानिसले आश्चर्य मान्दै भन्यो, ‘महात्मा, तपाईंले पनि कस्तो कुरा गर्नुभएको ? तपाईंले नै यो खम्बालई समाइरहनुभएको छ अनि तपाईं नै भनिरहनुभएको छ कि यसले मलाई छोडिरहेको छैन । यसले तपाईंलाई समाएको हैन, तपाईंले यसलाई पो समाउनुएको छ । तपाईंले यसलाई छोड्नुभयो भने त यसले पनि तपाईंलाई छोडिहाल्छ नि ।’ यो सुनेपछि आचार्य मुस्कुराए र उसलाई सम्झाउँदै भने, ‘जसरी मैले यो खम्बा समाइरहेको थिएँ, त्यसैगरी तिमीले पनि रक्सीलाई समाइरहेका छौ ।
रक्सीले तिमीलाई हैन, बरु तिमीले रक्सी छोडिरहेका छैनौ । यसैले तिमीले रक्सी छोड्यौ भने रक्सीले पनि तिम्रो पिछा आफसेआफ छोड्नेछ ।’ आचार्यको यस्तो भनाइ सुनेपछि त्यस मानिसले त्यही दिनदेखि रक्सी पिउन छोडिदियो ।